Azo atao tsara ny mampiasa teny gasy eo amin’ny sehatr’asa rehetra. Ny Foibe momba ny Teny ao amin’ny Akademia Malagasy efa miezaka rahateo mamorona teny vao mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny. Anio dia miantefa manokana amin’ireo mpiandraiki-draharaha sy tompon’andraikitra isan-karazany ny hafatra.
« Fa angaha Aho voatery hiteny gasy e! »
Izay angamba no ao an-tsaintsika izay zatra mampiasa teny frantsay. Hoy indrindra anefa i Rado : « aoka ho tsaroana mandrakariva fa ny Teny malagasy, miantefa any amin’ny fo ihany no afaka manentana ny vahoaka na inona na inona tian-kitaonamana azy ». Ny mpandraharaha, ny mpitantana, ny injeniera, ny mpahay toe-karena sy ireo olona avara-pianarana isan-karazany dia tsy maintsy mifanerasera amin’ny vahoaka. Raha fiteny vary amin’anana no entina ifampiresahana dia ho toy ny toriteny any an’efitra ny fandraisan’ny sarababem-bahoaka izany. Asa raha tadidintsika ilay ohatra netin’i Rado tamin’ny lahateny nataony tao amin’ny Akademia Malagasy ny 25 Jona 1994. Teny sadasada, tsy gasy tsy vazaha, no nentin’ilay injeniera nanentana ny tantsaha ho amin’ny fampandrosoana. Vokany : tsy nisy nahazo izay nolazainy ka nisaraka tamim-pahatezerana ny roa tonta. Hitantsika amin’izany fa sakana lehibe amin’ny fandrosoan’i Madagasikara ny tsy fahafehezana ny teny malagasy. Raisiko hatrany ny tenin’ity mpanoratra anisany nitolona ho an’ny tenindrazantsika manao hoe : « Aoka hiezaka hahay sy hampiasa Teny malagasy ny tompon’andraikitra rehetra te hampandroso ity tanindrazana malalantsika ity, raha tiany ho tafita sy hazava amin’ny vahoaka izay soridalana tiany hitarihana azy. »
Sarotra be izany miteny gasy izany !
Io no avalin’ny ankamaroan’ny olona rehefa entanina mba hampiasa teny malagasy isan’andro izy. Ekena fa manano sarotra ny mitady ireo voambolana mifandray amin’ny sehatra ikatrohan’ny tsirairay. Raha manana finiavana anefa isika dia ho vitantsika izany. Ny Foibe moma ny Tena Malagasy rahateo miezaka manapariaka ireo teny vao amin’ny alalan’ny
fandaharana VAHATRA ao amin’ny TVM
takelaka tranokala : http://www.tenymalagasy.gov.mg/
pejy Facebook : https://www.facebook.com/Teny-malagasy-487674954636128/
Boky : AHITSIO NY DISO I sy II, rakibolana rakipahalalana, sns.
Dikan-teny Malagasy an’ireo voambolana fampiasa eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana
Ireto àry misy santionana voambolana notsongaina fampiasa indrindra eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana sy ny fitantanana.
Cadre logique: Lasitra lojika
Ordre du jour: Lahadinika
Plan d’action: Fandaharan’asa
Tao amin’ny boky AHITSIO NY DISO faharoa no nalaina izy ireo. Tsara tokoa raha manana io boky io ny tsirairay atao fijery isaky ny misy voambolana tsy hay. Aza misalasala àry manatona ny Foibe momba ny Teny malagasy ao amin’ny rihana faharoan’ny tahala rarihasina izay mivarotra ny boky.
fandraharahana, foiben'ny teny malagasy, mpandraharaha malagasy, teny malagasy, teny vao, voambolana fitantanana, voambolana teknika